Faux Fur ukhaphethi, Faux Fur Carpet, Faux semvu ukhaphethi, bezimvu ukhaphethi - Wenwen
Sheep isikhumba ukhaphethi ingubo
China Ukukhiqizwa Isitolo esidayisa yonke impahla Australian Okuqotho ...
Kwenziwe ngentando elibizayo ebusika Real Long Fur Sheepsk ...
Ikhaya umhlobiso semvu Faux noboya ingubo qua High ...
Fashion ashisayo ethengisa eco ngezandla friendly noboya ukhaphethi
White obucayi Chaise longue semvu isiguqo ...
Isitolo esidayisa yonke impahla Australia semvu linye ucezu s ...
Real agundwe bezimvu semvu Car Seat pads
Real semvu bezimvu Car Seat
Universal Okugcwele Setha Long Fur semvu Car Seat ...
usayizi elikhulu bezimvu lambskin yokufakelwa eside ...
A Indwangu kanokusho ukuthi libukeka noboya yesilwane. Villi zihlukaniswe izingqimba ezimbili, olwelwesini ungukukhanya futhi obukhulu bristles iqonde, ungqimba kwangaphakathi kuhle futhi ethambile fibre iDemo. noboya yokufakelwa is abavame ukusetshenziswa kuma-amajazi, izingubo Linings, izigqoko, ezinjengenyanga, amathoyizi, omatilasi, imihlobiso angaphakathi, amatshe. Izindlela yokukhiqiza zihlanganisa ukunitha (weft ukunitha, asonte ukunitha nemithungo) kanye ukwelukwa. Indlela ukunitha weft ukunitha iyona zikhula esheshayo kanye kabanzi kunazo ...
Ukubekwa uphawu Strip
Lezi zimvu zamanzi ukubekwa uphawu strip eyodwa noma yiluphi uhlobo lwento, okwenza kube akulula ukuvula, futhi kunendima ukushaqeka ukumuncwa, manzi, ukwahlukanisa umsindo, ukushisa ukwahlukanisa, uthuli zokuvimbela, futhi nenkanuko edlulele. Seals akhiwe ngerabha, iphepha, lensimbi, plastic kanye nezinye izinto eziningi. Kusukela ngeminyaka yama-1980, emapheshana iraba uphawu isetshenzisiwe izimoto, iminyango namafasitela, amakhabethe, amafriji, izitsha kanye nezinye izimboni. Ngokusho nezidingo kwimisebenzi ehlukile, baye asethuthukile eliyingqayizivele ...
I guardrail onguthelawayeka yakhiwa ezimbili lukathayela guardrails steel nokuthunyelwe ezimbili fixedly aboshezelwa phakathi kwalezi ezimbili. Izigxobo ezimbili ayaboshezelwa phakathi ezimbili lukathayela guardrails steel. Lapho umgwaqo omkhulu siyasebenza evamile, guardrail bufakwe kalula zibe olufakwe Ukufakwa imbobo ekuvulweni ukuvikela kanye ukwehlukanisa guardrail kusukela ngaphandle komgwaqo. Kuyinto iyunifomu futhi emuhle. Lapho imoto ishayisa ke, ngoba lukathayela steel guardrail has imp ezinhle ...
Umbala ibhodi camera
Cai Tuban, eyaziwa nangokuthi i-ipuleti umbala, umbala ipuleti. Umbala camera steel plate wenziwe abandayo iphuma steel plate futhi lashukumisa steel plate njengoba substrate, ngaphansi ukuvundulula pretreatment (degreasing, ukuhlanza, impatho chemical ukuguqulwa), camera ngu indlela okuqhubekayo (roller enamathela indlela), nezitini kanye selehlile Imikhiqizo . I camera steel plate has isisindo ukukhanya, ukubukeka enhle ezinhle ukugqwala ukumelana, ngqo kungenziwa kusetshenzwe. Inikeza uhlobo olusha izinto zokusetshenziswa ...
Ngokwezibalo kusukela Hebei Metallurgical Imboni Association, kusukela ngo-January kuya ku-February 2018, imali enkulu yokuqothulwa kwehlathi lase umkhakha steel eSifundazweni Hebei kwaba 156.106 bhiliyoni yuan, oneminyaka engu-on-nyaka ukwanda kokungabi 5.03%, lokulandisa 27.67% we wesifundazwe main zezimboni imali yebhizinisi; inzuzo kwaba 9.84 billion. Yuan, ukwanda kokungabi 53,76% engu-on-nyaka, lokulandisa 30,47% inzuzo yezimboni wesifundazwe. Esikhathini esiyiminyaka Januwari-February, i-main ibhizinisi imali ma ...